Striatal dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုသည်သုံးနှစ်အကြာတွင်ကိုကာကိုရီးယားအလွဲသုံးစားပြုသူများအားဆုချရန် thalamic နှင့် medial prefrontal တုန့်ပြန်မှုများကိုခန့်မှန်းသည် (၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
Striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတို့သည် thalamic ဟောကိန်းထုတ်သုံးနှစ်အကြာတွင်ကင်းချိုးဖောက်မှုများ (2010) ဆုချမှ prefrontal တုံ့ပြန်မှု medial
synapses ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC မေလ 1, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
synapses ။ 2010 နိုင်ပါစေ; 64 (5): 397-402 ။
ရှမွေလသည် Asensio,1 မာရီယာဂျေရိုမီယို,1 Francisco ကဂျေရိုမီယို,1 ခရစ္စတိုဖာ Wong က,2 Nelly Alia-Klein,2 Dardo Tomasi,2 မျိုးဗီဇ-ဂျက်ဝမ်,2 ဖရန့် Telang,2 Nora ဃ Volkow,3 နှင့် Rita Z. စတိန်း2
dopamine ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်တစ်ဦးအနားယူအခြေခံမှာ (DA) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုယခင်ကတစ်ဦးချင်းစီစွဲခြင်းနှင့်လျှော့ ventral နှင့် dorsal prefrontal ဇီဝြဖစ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီမူးယစ်အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလျှော့ချ ventral တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်သည် non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်, မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့အဓိကလက္ခဏာမှစိတ်မချရသော sensitivity ကိုအခြေခံမှထင်နေသည်နှင့်အတူ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လျော့ချရေး။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အခြေခံမှာ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှပြောင်းလဲနေသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ covary လိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။ Striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှု [အတူတိုင်းတာခဲ့သည်11ခုနစျပါးကိုကင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တစ်ဦးချင်းစီစွဲနှင့်အတူငွေကြေးဆုလာဘ်မှကို C] raclopride နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်တုန့်ပြန် (3 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအကြာ) တိုင်းတာခဲ့သည်။ ရလဒ်များ dorsal striatum အတွက်အနိမ့် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုငွေကြေးဆုလာဘ်မှ thalamic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးကိုပြသ; ventral striatum အတွက်အနိမ့်ရရှိနိုင်ငွေကြေးဆုလာဘ်တိုးမြှင် medial prefrontal (Brodmann ဧရိယာ6/ 8 / 32) တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နေစဉ်။ ဤရွေ့ကားပဏာမရလဒ်တွေကို, ထိုလိုအပ်ချက်ပိုမိုကြီးမားနမူနာအရွယ်အစားအတွက်ပုံတူကူးယူခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအတည်ပြုခံရဖို့, အနားယူ striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအမူအကျင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ, prefrontal cortex အတွက် non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ (ပိုက်ဆံ) အားအလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခန့်မှန်းကြောင်းအကြံပြု နှင့် thalamus, အကင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အခွအေနေတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မြျှောလငျ့ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။
keywords: fMRI, PET, striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, thalamus, prefrontal cortex, ကိုကင်းစွဲ, ငွေကြေးဆုလာဘ်
dopamine အတွက် Striatal ကျဆင်းခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် (DA) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထံမှ supraphysiological dopaminergic ဆွဖို့အလယ်တန်း neuroadaptations ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါVolkow et al ။ , 2004) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့မကြာသေးမီကကင်းအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှစိတ်မချရသော prefrontal cortical sensitivity ကိုတစ်ဦးချင်းစီ (စွဲအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီစတိန်း et al ။ , 2007a) ။ ကျိန်းဝပ်ဟာ ventral နှင့် dorsal prefrontal cortex (PFC) တွင်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အခြေခံ striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေးနှင့်အရက်) အကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပေးထားသော (Volkow et al ။ , 2001; Volkow et al ။ , 1993b; Volkow et al ။ , 2007b), ကျနော်တို့အစိတ်အပိုင်းအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါစွဲထဲမှာ Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မှလျှော့ cortical sensitivity ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဤ fMRI ရလဒ်များကိုအနက်Volkow et al ။ , 2007a) ။ သို့သျောလညျးအတွက်အခြေခံ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောအကြားတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်မှာ) PFC ၏ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှု (နှင့်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့် striato-thalamic-prefrontal cortical circuit ကိုပါဝင်သောအခြားဒေသများ) မူးယစ်ဆေးတစ်ဦးချင်းစီသရုပ်ပြခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲစွဲ။
လက်ရှိပဏာမလေ့လာမှုမှာထိုကြောင့်ငါတို့သည် [အတူအနားယူအခြေခံမှာရရှိသော DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူငွေကြေးမက်လုံးပေးတာဝန်သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခို (BOLD) fMRI တုံ့ပြန်မှု [ဆက်နွယ်နေကြောင်း11ကိုကင်းထဲမှာကို C] raclopride နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET), မတိုင်မီ fMRI လေ့လာမှု3နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်း] တစ်ဦးချင်းစီစွဲ။ ကျနော်တို့ကို (striato-thalamic-prefrontal cortical ဆားကစ်နှင့်အခြားသောဒေသများ) တွင် PFC အတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်သိသိသာသာကိုကင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဒေတာကိုခုနစျယောတက်ကြွကင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့မြင်, ဘာသာရပ်များ (5 အထီးနှင့်အ2အမျိုးသမီး, အာဖရိကန်အမေရိကန်အားလုံးစွဲ စားပွဲတင် 1 နှစ်ခုယခင်ကထုတ်ဝေ neuroimaging လေ့လာမှုများ (ပါဝင်ခဲ့ဖူးကြောင်းအသက်အပိုင်းအခြား) များအတွက်စတိန်း et al ။ , 2007a; Volkow et al ။ , 2006a; Volkow et al ။ , 2006b) ။ , ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောနှင့်စိတ်ရောဂါစာမေးပွဲကစိစစ်အဖြစ်ပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာပါဝင်စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အကျဉ်းမှာတော့ဘာသာရပ်များအပြင်လက်ရှိကင်းမှီခိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက် DSM-IV စံကျေပွန်, (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုထက်အခြား) အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ၏အခမဲ့, နှလုံးသွေးကြော, ဒါမှမဟုတ် endocrinological ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များမှာအနည်းဆုံးယခင်6လ (အခမဲ့-အခြေစိုက်စခန်းသို့မဟုတ်အက်ကွဲအနည်းဆုံး "လေးဂရမ်" တစ်ပါတ်မှုအတွက်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည် ဖြစ်. , ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1 သည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု variable တွေကိုအဘို့) ။ ဆေးခြောက်, barbiturates, အမ်ဖီတမင်း, ဒါမှမဟုတ် opiates ၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုကို Pre-စကင်ကိုဆီးစမ်းသပ်မှုများကငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် corroborated ခဲ့သည်။ လုပျထုံးလုပျနညျးဂရုတစိုက်ရှင်းပြပြီးဒေသခံ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ခဲ့ကြသည်ပြီးနောက် Written အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်အားလုံးဘာသာရပ်များအဘို့အရယူခဲ့ရသည်။
အသက်အပိုင်းအခြား, ကိုကင်းသုံးစွဲမှုသမိုင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန် variable တွေကို (လှုံ့ဆျောမှု, တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှု) နှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်မှု dopamine နှင့်အတူ (DA) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax / KD) ကို caudate အတွက် putamen နှင့် ventral အပါအဝင်နမူနာဖော်ပြချက် ...
PET Scan ဖတ်မယ့် CTI 931 စကင်နာ (Siemens, နို့ဗိုင်း,) ဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ [၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးပြီးနောက် scan ဖတ်ခဲ့သည်11ကို C] raclopride တစ်အတော်လေးနိမ့်ဆှဖှေဲ့ DA D2 / D3 အဲဒီ receptor radioligand ။ positioning ကို, သွေးလွှတ်ကြောနှင့်သွေးပြန်ကြော catetherization, နှင့် radiotracer ၏အရေအတွက်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသေးစိတ်ယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့ကြ (Volkow et al ။ , 1993b) ။ အတိုချုပ်ခြင်း, 60 မိနစ်ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ် [ချက်ချင်း၏ 4-10 MCI ၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးပြီးနောက်စတင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride (တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု> ဆေးထိုး၏အချိန်မှာ 0.25 Ci / μmol) ။ လေ့လာမှုပြုလုပ်စဉ် PET သည်ကင်မရာတွင်မျက်စိဖွင့် ထား၍ အခန်းကိုမှေးမှိန်စွာထွန်းညှိခဲ့ပြီးဆူညံသံကိုအနိမ့်ဆုံးအထိထားခဲ့သည်။ အတွက် [အကျိုးစီးပွားဒေသများ (ROIs)11ကို C] raclopride ပုံတွေကို dorsal (caudate, putamen) နှင့် ventral striatum နှင့် Non-တိကျတဲ့စည်းနှောင်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုတဲ့ cerebellum များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ တိုင်းဘာသာရပ်များအတွက်, ဤသုံးပါး striatal ROIs ပိုင်းတွင်တစ်ဦးပျမ်းမျှဖတ် (10 မိနစ် 60 မှလှုပ်ရှားမှု) အပေါ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ, ပြီးတော့ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ်မှ projected ခဲ့ကြသည်Volkow et al ။ , 1993b) ။ [များအတွက်အချိန်-လှုပ်ရှားမှု curves11ကို C] က striatum အတွက် raclopride နှင့်သွေးရည်ကြည်အတွက် cerebellum နှင့်မပြောင်းလဲ tracer များအတွက်အချိန်-လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်တစ်ဦးသော graphical အသုံးပြု. ဖြန့်ဖြူး volumes ကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် Reversible လုပ်စနစ်များများအတွက် technique ကိုလေ့လာဆန်းစစ် (Logan et al ။ , 1990) ။ အဆိုပါ cerebellum အနုတ် 1 အတွက်ရန် striatum အတွက်ဖြန့်ဖြူး volume ၏အချိုးအစားအဖြစ်ရရှိသော parameter သည် Bmax / KD, DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု၏မော်ဒယ် parameter သည်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအပေဒေတာ fMRI ဒေတာမတိုင်မီ 3.3 ± 1.2 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းရယူခဲ့ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ဘာသာရပ်များသုံးပိတ်ဆို့ငွေကြေးမက်လုံးပေးအခြေအနေများ ($ 0.45, $ 0.01, ဒါမှမဟုတ် $ 0.00) အရတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဘာသာရပ်များ [(ထံမှအဆင်ပြေအောင် (ကခလုတ်ကိုနှိပ်) သို့မဟုတ်တစ်ဦးမောင်းလှုံ့ဆော်မှု (အနီရောင်စတုရန်း) စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ရာမှမပြောဘဲ နေ. , ရှေ့သင်ကြားပို့ချလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတုန့်ပြန်ဖြစ်စေThut et al ။ , 1997)] ။ 18 စမ်းသပ်မှုတွေ, စာနယ်ဇင်းကိုးအားလုံးနှင့်မျှမ-စာနယ်ဇင်းခြောက်ကြိမ် / လုပ်ကွက်ထပ်ခါတလဲလဲသောငွေကြေးအခြေအနေများအသီးအသီးအဘို့, ရှိခဲ့သည် [(အသေးစိတ်ကြည့်ရှုစတိန်း et al ။ , 2007a; စတိန်း et al ။ , 2007b; စတိန်း et al ။ , 2007c)] ။ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအချိန် (task ကိုတလျှောက်လုံးစုဆောင်းခဲ့ကြစားပွဲတင် 1) ။ စစ်မှန်သောဘဝမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတူအောင်ဖန်တီးရန်, ဘာသာရပ်များစွမ်းဆောင်ရည်တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးဒီ task အတွက် $ 50 အထိရရှိခဲ့သည်။ ကပြီးပြည့်စုံလေ့လာမှုတစ်ရက်စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များ '' စုစုပေါင်းဝင်ငွေရရှိမှုနှစ်ဆဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပိုက်ဆံတစ်အတော်လေးသိသိသာသာငွေပမာဏဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ task ကိုတလျှောက်လုံးအကျိုးကိုပေါ်ဖြစ်ပေါ်သတိထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတာဝန် MRI-သဟဇာတကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးနည်းလမ်းဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (စိတ်လှုပ်ရှားစရာမှစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်မှိုင်းမှ boring,07 မှအကွာအဝေး) နှင့်အဲဒီနှစျခု ratings ၏ယုတ်တစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်တာဝန်ပြီးစီးပေါ်၌ဘာသာရပ်များနှစ်ခုအမြင်အာရုံ analogue အကြေးခွံသုံးပြီးသုံးငွေကြေးအခြေအနေများအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသူတို့ရဲ့အဆင့်ကို rated Self-အစီရင်ခံတာဝန်လှုံ့ဆျောမှု (၏စားပွဲတင် 1).
fMRI ဒေတာများကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့် Image ကိုသုံးသပ်ခြင်း
MRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တစ် 4-T ကတပြင်လုံးကို-ခန္ဓာကိုယ် MRI စကင်နာ (Varian, Palo Alto, CA / Siemens ဘာလင်) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦး T2 * Single-shot gradient ကို-ပဲ့တင်သံ echoplanar ပုံရိပ် sequence ကို (TE = 20, TR = 3500 msec, 4-မီလီမီတာအချပ်အထူ, 1-မီလီမီတာကွာဟမှု, ပုံမှန်အား 33 Coronal ချပ်, အမြင်လယ်ကွင်း = -weighted အတူ BOLD တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာခဲ့ကြသည် 20 စင်တီမီတာ, 64 × 64 matrix ကိုအရွယ်အစား, 90 ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်နမူနာ, 200 အချိန်အချက်များနှင့်လေး Dummy Scan ဖတ်) နဲ့လှန်ထောင့်, 91-kHz bandwidth ကို°။ ချက်ချင်းအသီးအသီးပြေးပြီးနောက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်အဖြစ် padding (1-မီလီမီတာအများဆုံးရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်း (voxel အရွယ်အစား 32%) နှင့် 1 °လည်ပတ်၏လက်ခံခဲ့သည်တံခါးခုံအတွင်းပိုင်းခဲ့သည့်ရွေ့လျားမှု minimize လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်Caparelli et al ။ , 2003) ။ တစ်ဦးက T1 မာန်တင်းသုံးရှုထောင်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် equilibrium Fourier sequence ကိုအသွင်ပြောင်း (Lee က et al ။ , 1995) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်; အားလုံး MRI ပုံရိပ်တွေစုစုပေါင်း morphological ဦးနှောက်မူမမှန်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့ကြသည်။
အားလုံးအချိန်အခန်းဆက် SPM99 format နဲ့ (သိမှု Neurology, လန်ဒန်၏ Wellcome ဦးစီးဌာန) သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကခြောက် parameter သည်တင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်း (သုံးလည့်, သုံးဘာသာ) ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုအဘို့ပြင်ပေးဖို့ image ကိုရှိမယ်, များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ realigned ဒေတာအစုံ (က 12-parameter သည်ဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်းအတူ Talairach ဘောင်မှပုံမှန်ခဲ့ကြသည်Ashburner et al ။ , 1997)3×3×3မီလီမီတာတစ် voxel အရွယ်အစားကို အသုံးပြု.3။ တစ်ဦး 8-မီလီမီတာ Full-width ကိုဝက်အများဆုံး Gaussian kernel ကိုဒေတာချောမွေ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကယေဘုယျ linear မော်ဒယ် (Friston et al ။ , 1995) နှင့်တစ်ဦး canonical hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ convolved တစ်သေတ္တာကားဒီဇိုင်းကို Activation မြေပုံများအားတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အချိန်စီးရီးနိမ့်-pass filter ကိုနှင့် high-pass filter ကိုအဖြစ် 1 / 750-ဒုတိယဖြတ်-ချွတ်ကြိမ်နှုန်းအတိုင်း hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ filtered တီးဝိုင်း-pass ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်သုံးထူးခွားသညျ့ဖန်တီးခဲ့ကြ (အခြေခံ vs. 45 ¢, 1 ¢, ဒါမှမဟုတ်0¢အားလုံးခြောက်လတာဝန်ပြေးတလွှားပျမ်းမျှ) ။
သုံး voxel-based (တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်) BOLD fMRI တုံ့ပြန်မှုအကြားရိုးရှင်းတဲ့ဆက်စပ်မှု (fixation အခြေခံ vs. တစ်ခုချင်းစီကိုငွေကြေးဆနျ့ကငျြဘ) နှင့်နှစ်နိုင်ငံအတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု1 caudate, putamen နှင့် ventral striatum (ဆိုလိုသည်မှာဤ ROIs သုံးခုစလုံးတွင် Bmax / Kd တန်ဖိုးများကိုမျိုးစေ့တန်ဖိုးများအဖြစ်အသုံးပြုသည်) ကို (ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားသည့်စုစုပေါင်းကိုးခုအတွက်) ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးကိုဆန်းစစ်ခြင်းပြုခြင်းများတွင်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာတံခါးခုံကိုအနည်းဆုံးဆက်တိုက် voxels (၁၃၅ မီလီမီတာ) ဖြင့် p <.05 စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့် (အနည်းဆုံး Z = 2.5 သို့မဟုတ် T = 4.03) ဖြင့်တည့်မတ်ခဲ့သည်။3) ။ ကျနော်တို့ကိုးဆက်စပ်လေ့လာဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေသောကြောင့်, ကျနော်တို့နောက်ထပ် (ဆိုလိုသည်မှာအမည်ခံအရေးပါမှုအဆင့်ကိုp≤.006မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်တညျ့) အမျိုးအစားငါအမှားဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တစ်ဦး Bonferroni ဆုံးမခြင်းလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ငါတို့သည်လည်း (DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအားလုံးဒေသစစ်တမ်းများနှင့်တာဝန်-related စွမ်းဆောင်ရည် variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုကောက်ယူစားပွဲတင် 1) နှင့်ရွေးချယ်ထားသော BOLD fMRI ROIs (ဤတွင် cluster maxima voxel ကိုအသုံးပြုသည်) ။ Type I အမှားများမှအကာအကွယ်ပေးရန်၊ ဤရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများအတွက်မိသားစုဆိုင်ရာပညာအဆင့် (p <.01) တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။
စာရင်းအင်းများငွေကြေးဆုလာဘ်မှ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် fMRI BOLD တုံ့ပြန်မှု (45 ¢) အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု (ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နှင့်တစ်ဦးဦးတွေးဆအဖြစ် PFC နှင့် thalamus ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင်2နှင့် ပုံ 1) ။ အထူးအမြင့်ဆုံးငွေကြေးဆုလာဘ်မှ thalamic BOLD fMRI တုံ့ပြန်မှု (45 ¢) (ပု caudate အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းပုံ 1A) ကို putamen များအတွက်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ (Data ပြမပါ) ။ အဆိုပါ supramarginal gyrus အတွက် BOLD fMRI signal ကိုပု putamen အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအလားတူဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ညာဘက် dorsal သာလွန် medial တိုကျရိုကျ gyrus ၌ဤအမြင့်မားဆုံးငွေကြေးဆုလာဘ်မှ fMRI တုံ့ပြန်မှု [Brodmann ဧရိယာ (BA ဘွဲ့)6/ 8 / 32] (ပု ventral striatum အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအဆိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းပုံ 1B) ။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှု (ပုံ 1) နေဆဲ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုနှင့်အတူ) စဉ်ဆက်မပြတ် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုနှင့်အတူ) fMRI နှင့် PET နှင့်ကိုကင်းအသုံးပြုမှု၏အနှစ် (r> | .95 |, p <.01) အကြားအချိန်နှောင့်နှေးကိုင်ပြီးပြီးနောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤဆက်စပ်မှုကိုငွေကြေးနိမ့်ကျသောဆုများ (1 0) သို့မဟုတ် non-reward (XNUMX during) အတွင်းတွင်မတွေ့ရှိရပါ။
(အမျိုးအနွယ်တန်ဖိုးကိုအဖြစ်) နှင့် thalamic BOLD fMRI တုံ့ပြန်မှု (စပျစ်သီးပြွတ် maxima က x = 2, y က = -9, z = 11 မှာ) နှင့်အကြား (က) caudate DA D14 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြားဆက်စပ်မှု၏ Localization (လက်ဝဲ) နှင့် scatterplot (ညာ) (ခ) ventral striatum DA D2 အဲဒီ receptor ...
သိသာထင်ရှားသောအပြုသဘော (+) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (-) ဆက်စပ်မှု (Pearson ကိန်း) dopamine အကြား (DA) D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax / KD) ကို caudate, putamen နှင့် ventral striatum အတွက် (အမျိုးအနွယ်တန်ဖိုးများအဖြစ်) နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှ fMRI BOLD တုံ့ပြန်မှု (45 ¢, ...
ဆက်စပ်မှုကိုလည်းအားလုံးတာဝန်အခြေအနေများ (စဉ်အတွင်း ventral striatum DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ပြသလေ့လာဆန်းစစ်စားပွဲတင် 1) ။ သို့သော်ဤဆက်စပ်မှုသည်မိသားစုပညာပေးဆုံးမခြင်းကိုမကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အမြင့်ဆုံးသောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အခြေအနေ (၄၅ ¢၊ R = -45; p <0.78) အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူညာဘက် dorsal သာလွန် medial frontal gyrus ROI တွင် BOLD တုံ့ပြန်မှုများအကြားအပျက်သဘောဆက်စပ်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ အလားတူခေတ်ရေစီးကြောင်းအတွက်အခြား variable တွေကိုမဆိုအဘို့လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါ စားပွဲတင် 1 ဒီ PFC သို့မဟုတ်ဤနမူနာအတွက် thalamic ရွယ်နှင့်အတူ။
လက်ရှိရလဒ်တွေကို, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးကိုသရုပ်ပြနှင့်ကိုကင်းအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှ fMRI BOLD တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးချင်းစီစွဲ။ အထူးသနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု (နေဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ် rostral cingulate ဇုန်နှင့်အတူထပ်အဆိုပါ dorsal သာလွန် medial တိုကျရိုကျ gyrus [BA6/ 8 / 32 ကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Ridderinkhof et al ။ , 2004)] နှင့် ventral striatum အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးဆုလာဘ်ပေးရန် ventral striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, မြင့်ကဒီ PFC ဒေသရဲ့တုန့်ပြန်သည့်အနိမ့်သော။ ကိုကင်းလူတစ်ဦးချင်းစီ (သို့လျှော့ချ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုသရုပ်ပြစွဲကြောင်းပေးထားVolkow et al ။ , 2004), (အခြေခံ prefrontal ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းသွားVolkow et al ။ , 1993b) နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှ PFC sensitivity ကိုလျှော့ချ (စတိန်း et al ။ , 2007a), ဒီဆက်စပ်မှု၏ညှနျကွားမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအလားတူတစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည် အနုတ် အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်မဟုတ်ဘဲအတွက် ventral striatum (အနျူကလိယ accumbens ဘယ်မှာတည်ရှိသည်) နှင့်တစ်ဦးထက်ပို ventral PFC ဒေသတွင်း၌အရက်-related တွေကိုမှ fMRI BOLD တုံ့ပြန်မှုကို (medial PFC နှင့် rostral anterior cingulate cortex လွှမ်းခြုံ) တွင် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအကြားဆက်စပ်မှု ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (Heinz et al ။ , 2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်အလယ်တန်းဤနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုတိုးချဲ့ Non-မူးယစ်ဆေး စစ်ကူ။ ဒါဟာ (အကင်းအောက်ပိုင်း ventral striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမကြာခဏတုံ့ပြန်ချက်မှစွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရလည်းဒီ PFC ဒေသကိုသက်ဝင်သူများမှာစွဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်Ridderinkhof et al ။ , 2004), ဖြစ်နိုင်သည်ငွေကြေးအားဖြည့်ဖို့ကသူတို့လျှော့ sensitivity ကိုများအတွက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တိုးလာ Impulse များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်။ ဒီအနက်ထောက်ခံမှုအတွက်အသင်းအဖွဲ့များတာဝန်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူနေသောခေါင်းစဉ်: ပိုမြန်စွမ်းဆောင်ရည်ငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်အောက်ပိုင်း DA D2 ventral striatal အဲဒီ receptor ရရှိမှုမှပိုမိုမြင့်မား PFC တုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွင်ဤဆက်စပ်မှုအမည်ခံအရေးပါမှုအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေမယ့်အခြားလေ့လာမှုများမကြာသေးမီက (dopamine ပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်နေကြပြီမှတ်ချက်Landau et al ။ , 2009) နှင့် dopamine binding အလားအလာ (Cervenka et al ။ , 2008) တုံ့ပြန်မှုကြိမ်အပါအဝင်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတူ။ ဒါဟာ (ကိုကင်းကိုလည်းအခြေခံမှာအနိမ့် PFC ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အနိမ့် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များ, စွဲကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်Volkow et al ။ , 1993bပိုမိုမြင့်မားသော DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုမြင့်မားအခြေခံ prefrontal ဇီဝြဖစ်ရှိသူများထက်စိန်ခေါ်လာသောအခါ), ကြီးမြတ်သောပြောင်းလဲနေသောပြောင်းလဲမှု generate ။
ဆနျ့ကငျြ, အပြုသဘောဆက်စပ်မှုငွေကြေးဆုလာဘ်ပေးရန် thalamic တုံ့ပြန်မှုကို (caudate များအတွက်သိသာထင်ရှားသောနှင့် putamen များအတွက်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ) ကို dorsal striatum အတွက် DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုမြင့်မားခြင်း, ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းထိုကဲ့သို့သော thalamus များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ thalamus, ဦးနှောက်ရဲ့ DA များအတွက် key ကိုပစ်မှတ် (Sanchez-Gonzalez et al ။ , 2005), Conditions အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေတဲ့အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ပါကကမမျှော်လင့်တဲ့အခါ methylphenidate, ထိုအလားတူကင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါး DA သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, (မျှော်လင့်ထားသည့်အခါဥပမာ, ငါတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သော thalamic ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီVolkow et al ။ , 2003) ။ ကိုကင်းက "စွဲ" ကြွက် (ရန် Home-လှောင်အိမ်ထဲမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါထက်မူးယစ်ဆေး-အေးစက်အရပျ၌အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါအလားတူပင်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက် သာ. ကြီးမြတ် thalamic ဇီဝြဖစ်ပြသKnapp et al ။ , 2002) သို့မဟုတ်မဟုတ်သောလူ့မျောက်ဝံများ (ထဲမှာ Non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး vs. ဆက်ပြောပါတယ်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာPorrino et al ။ , 2002) ။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့လညျးကြောင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများ, ဒါပေမယ့်မရထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပြသွေးကြောသွင်း methylphenidate သိသိသာသာ thalamus အတွက် DA တိုးမြှင့်နှင့်ဤတိုး (methylphenidate အားဖြင့်ရူးနှမ်းယင်းတဏှာ၏ပြင်းထန်မှုမှအချိုးကျခဲ့သည်Volkow et al ။ , 1997) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိအစီရင်ခံဆက်စပ်မှုဟာကိုကင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မြျှောလငျ့ dopaminergically modulated thalamic ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုထားသည်။
ရှင်းနေသည်မှာလက်ရှိရလဒ်တွေကိုစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာနှစ်ဦးစလုံးကိုထိန်းချုပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားအတွက်ပုံတူကူးယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုပါဝင်တိုင်းတာအဖြစ် (မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း dopaminergic midbrain ၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုပြသသတိပြုပါ [တိုက်ရိုက် DA D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အကြားအထွေထွေဆက်ဆံရေးဟာဤရလဒ်များကိုချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် fMRI နှင့်အတူ) နှင့်2ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် ventral striatum အတွက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ် DA D10 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Hakyemez et al ။ , 2008)], သို့မဟုတ်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းစွဲဖို့တိကျတဲ့ရှိမရှိကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤအစီရင်ခံစာ၏တစ်ဦးကထပ်မံကန့်သတ်သည့်ပေနှင့်ပျမ်းမျှအား3နှစ်ပေါင်းခဲ့သည့် fMRI လေ့လာမှုများ, အကြားကြာသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ PET အစီအမံများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအတော်လေးမြင့်မားသည်ဖြစ်သော်လည်း (19 လအထိနောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူ) [စမ်းသပ်-retest လေ့လာမှုများ [၏အနိမ့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသတင်းပို့11ကို C] binding အလားအလာ (7.9% အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ) သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ် (6-8% ပြောင်းလဲမှု) နှင့်မြင့်မားသော intraclass ဆက်စပ်မှု (0.81 - 0.90) raclopride နှစ်ခုသီးခြားအစီအမံ (အကြား striatal dopaminergic စနစ်Hietala et al ။ , 1999; Schlösser et al ။ , 1998; Uchida et al ။ , 2009; Volkow et al ။ , 1993a)], စမ်းသပ်မှု-retest အစီအမံကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများပြုမိကြပြီမဟုတ်နှင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသမိုင်းတစ် function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းဘောင်အတွင်းပေနှင့် fMRI တိုင်းတာဖျော်ဖြေပုံတူကူးယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
, တစ်ချိန်တည်းဘောင်အတွင်းမှာပေ-fMRI ခံယူကြောင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုကြီးလေ့လာမှုများအတွက်ဆိုင်းငံ့ပွားအနှစ်ချုပ်, ငါတို့ရလဒ်များကို PFC နှင့်ကိုကင်းအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှ thalamic တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးချင်းစီ DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအားဖြင့် modulated နိုင်စွဲကြောင်းအကြံပြု အဆိုပါ ventral နှင့် dorsal striatum အတွက်အသီးသီး။ အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူမှရလဒ်များကို၏ဆက်စပ်မှု, ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ [ဥပမာ, (Martinez et al ။ , 2007)], အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်စူးစမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Ministerio က de Ciencia အီးInnovación, စပိန် (SAF1-01) မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်;: (023579R21DA02062 နှင့် R2007DA66801 RZG မှ) ဤလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအမေရိကန်ဦးစီးဌာန (OBER) မှဓါတ်ခွဲခန်းကိုတိုက်ရိုက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး; နှင့်အထွေထွေလက်တွေ့သုတေသနစင်တာ (5-MO1-RR-10710) ။
1နှစ် ဦး စလုံး hemisphere (တွဲ t ကို <2, p> 0.1) အကြား DA D0.9 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိ၏ တန်ဖိုးများထို့ကြောင့်အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။
အသိပေးစာ: ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအမေရိကန်ဦးစီးဌာနနှင့်အတူစာချုပ်အမှတ် DE-AC02-98CHI-886 အောက်မှာ Brookhaven သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းတို့၏, LLC တို့ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အစိုးရဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ထုတ်ဝေသူစာစောင်များအတွက်ဆောင်းပါးကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်, ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်မျိုးပွားကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ, အမေရိကန်အစိုးရရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ကမ္ဘာကျယ်ပြန့်လိုင်စင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
Ashburner J ကို, Neelin P ကို, Collins က DL, အီဗန်တစ်ဦးက, Friston K. ပုံရိပ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရေးသို့ကြိုတင်အသိပညာထည့်သွင်း။ Neuroimage ။ 1997;6(4): 344-352 ။ [PubMed]
Caparelli EC, Tomasi: D, အာနိုးက S, Chang က L ကို, အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များအတွက် Ernst တီဋ-Space ကိုအခွပွေုအကျဉ်းချုပ်ရွေ့လျားမှု detection စနစ်။ Neuroimage ။ 2003; 20 (2): 1411-1418 ။ [PubMed]
Cervenka S က, Bäckman L ကို, Cselényi Z ကို, Halldin ကို C, Fardea အယ်လ်အသင်း dopamine D2-receptor စည်းနှောင်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကြားလူ့ striatum ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ compartmentalization ဖော်ပြသည်။ NeuroImage ။ 2008; 40: 1287-1295 ။ [PubMed]
Friston KJ, Holmes က AP, Worsley KJ, Poline JB, Frith CD ကို, Frackowiak သည် RS ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေချဉ်းကပ်နည်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 1995; 2: 189-210 ။
စတိန်း RZ, Alia-Klein N ကို, Tomasi: D, Zhang က L ကို, ဝါဂွမ်း L ကို, Maloney T က, Telang က F, Caparelli EC, Chang က L ကို, Ernst T က, Samaras: D, Squires N ကို, Volkow ND ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှ prefrontal cortical sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသလဲ? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007a; 164: 43-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Tomasi: D, Alia-Klein N ကို, ဝါဂွမ်း L ကို, Zhang က L ကို, Telang က F, Volkow ND ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ gradients မှပုဂ္ဂလဒိဋ္ sensitivity ကိုကိုကင်းချိုးဖောက်ဆုချမှ frontolimbic activation နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007b; 87: 233-240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Tomasi: D, Alia-Klein N ကို, Zhang က L ကို, Telang က F, Volkow ND ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်။ Neuroimage ။ 2007c; 35 (1): 194-206 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hakyemez HS, Dagher တစ်ဦးက, Smith က SD, Zald DH ။ တစ်ဦး passive ငွေကြေးဆုလာဘ်တာဝန်စဉ်အတွင်းကျန်းမာလူသားတွေအတွက် Striatal dopamine ဂီယာ။ Neuroimage ။ 2008; 39: 2058-2065 ။ [PubMed]
Heinz တစ်ဦးက, Siessmeier T က, Wrase J ကို, Hermann: D, Klein က S, Grusser သည် SM, Flor H ကို, Braus DF, Buchholz HG, Grunder, G, Schreckenberger M က, Smolka MN, Rosch က F, မန်း K သည်, dopamine: D အကြား Bartenstein P. ညမညသဘောတရား ( 2) ကို ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် receptors ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161 (10): 1783-1789 ။ [PubMed]
Hietala J ကို, Någren K ကို Lehikoinen P ကို, Ruotsalainen ဦး, [2C] -raclopride အတွက် Vivo နှင့်အတူ striatal D11 dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ဆှဖှေဲ့၏Syvälahtiအီးအတိုင်းအတာ: တစ်စမ်းသပ်-retest ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1999; 19 (2): 210-207 ။ [PubMed]
Knapp CM, Printseva B, Cottam N ကို, cue ထိတွေ့မှု၏ Kornetsky C. အကျိုးသက်ရောက်မှုဦးနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ 8 ရက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီး။ ဦးနှောက် Res ။ 2002; 950: 119-126 ။ [PubMed]
Landau သည် SM, Lal R ကို, O'Neil JP, Baker က S, Jagust WJ ။ Striatal dopamine နဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်။ Cereb Cortex ။ 2009; 19 (2): 445-454 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lee က JH, Garwood M က, Menon R ကို, Adriany, G, Andersen က: P, Truwit CL, Ugurbil K. အမြင့် contrast နဲ့မြင့်မားတဲ့လယ်ကွင်းမှာအစာရှောင်ခြင်းသုံးရှုထောင်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 1995; 34 (3): 308-312 ။ [PubMed]
Logan L ကို, မုဆိုး JS, Volkow ND, Wolf ကအေပီ, Dewey SL, Schlyer DJ သမား, MacGregor RR, Hitzemann R ကို, Bendriem B, Gatley SJ ။ (- -) လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ကင်းပေလေ့လာမှုများ [N-11C-methyl] မှလျှောက်ထားအချိန်-လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကနေ binding Reversible လုပ် radioligand ၏ graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1990; 10: 740-747 ။ [PubMed]
Martinez: D, Narendran R ကို, Foltin RW, Slifstein M က, Hwang: D, Broft တစ်ဦးက, Huang က Y ကို, Cooper ကတီဘီ, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Kleber HD ကို Laruelle အမ်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် Dopamine ဖြန့်ချိ: သိသိသာသာတုံးကိုကင်းမူတည်နှင့်ရွေးချယ်မှု၏ခန့်မှန်းရန် self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 622-629 ။ [PubMed]
Porrino LJ, လီယွန်: D, Miller က MD, Smith က HR, Friedman DP, Daunais JB, Nader, MA ။ အဆိုပါ nonhuman မျောက်အတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ကနဦးအဆင့်ကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု၏ဇီဝဖြစ်စဉ်မြေပုံ။ J ကို Nerosci ။ 2002; 22: 7687-7694 ။ [PubMed]
Ridderinkhof KR, Ullsperger M က, Crone EA ၏, Nieuwenhuis အက်စ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2004; 306 (5695): 443-447 ။ [PubMed]
Sanchez-Gonzalez, MA, Garcia က-Cabezas MA, ရီ B, Cavada C. အဆိုပါမျောက် thalamus ဦးနှောက် dopamine များအတွက် key ကိုပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25 (26): 6076-6083 ။ [PubMed]
Schlösser R ကို, Brody JD, Dewey SL, Alexoff: D, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Volkow N ကို, Logan J ကို, Wolf က AP ။ 11C-raclopride ပေနှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေး neurotransmitter လှုပ်ရှားမှု၏ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေး။ synapses ။ 1998; 28 (1): 66-70 ။ [PubMed]
Thut, G, Schultz W က, Roelcke ဦး, Nienhusmeier M က, Missimer J ကို, Maguire RP, Leenders KL ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အားဖြင့်လူ့ဦးနှောက်၏ activation ။ Neuroreport ။ 1997; 8 (5): 1225-1228 ။ [PubMed]
Uchida H ကို, Graff-Guerrero တစ်ဦးက, Mulsant BH, Pollock BG, Mamo DC က။ : D (2) တိုင်းတာခြင်း၏ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေး antipsychotics နဲ့ကုသ schizophrenia လူနာ receptors ။ Schizophr Res ။ 2009; 109 (1-3): 130-133 ။ [PubMed]
Volkow ND, Chang က L ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Ding YS, Sedler M က, Logan J ကို, Franceschi: D, Gatley J ကို, Hitzemann R ကို, Gifford တစ်ဦး, ဝင်းကို C, စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏ Pappas N. အနိမျ့အဆငျ့: အဆိုပါ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158 (12): 2015-2021 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Dewey SL, Schlyer DJ သမား, MacGregor R ကို, Logan J ကို, Alexoff: D, Shea ကို C, လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding Carbon-11-raclopride ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများ Hitzemann R. Reproducibility ။ J ကို Nucl Med ။ 1993a; 34: 609-613 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer DJ သမား, Dewey SL, Wolf က AP ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993b; 14 (2): 169-177 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှုတွေကနေရလဒ်တွေကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;9(6): 557-569 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Swanson JM, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Telang အက်ဖ် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch Neurol ။ 2007a; 64 (11): 1575-1579 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Foltin RW, မုဆိုး JS, Abumrad NN, Vitkun S က, Logan J ကို, Gatley SJ, Pappas N ကို, Hitzemann R ကို, Shea အီး။ ကိုကင်းနှင့်အ dopamine Transporter ထေို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ သဘာဝ။ 1997; 386 (6627): 827-830 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို, မုဆိုး JS, Wong ကနေ C, ဂြနျေး M က, Telang က F, Swanson JM ။ methylphenidate ဖို့နဲ့ Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားဘာသာရပ်များအတွက်၎င်း၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖို့ဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မျှော်လင့်ထား၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuroimage ။ 2006a; 32 (4): 1782-1792 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Ma Y ကို, မုဆိုး JS, Zhu W က, Maynard L ကို, Telang က F, Vaska P ကို, Ding YS, Wong ကနေ C, Swanson JM ။ မျှော်လင့်ထားသည့်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်အဲဒါတွေက Metabolic နှင့်ကင်းချိုးဖောက်မှုများအတွက်စိတ်ကြွ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (36): 11461-11468 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Childress AR, ဂြနျေး M က, Ma Y ကို, dorsal striatum အတွက် Wong က C. ကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2006b; 26 (24): 6583-6588 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဂြနျေး M က, Ma Y ကို, Pradhan K ကို detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Wong က C. လေးနက်တဲ့လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2007b; 27 (46): 12700-12706 ။ [PubMed]